Ikhabhinethi eWalland Forests-kwithunzi leSmokies
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLee
Ikhabhathi yokwenyani eWalland Forests ecaleni komlanjana ohambahambayo, imizuzu nje ukusuka eTownsend kunye neGreat Smoky Mountains National Park yindawo efanelekileyo yokuphumla nokuphumla. Imayile enesiqingatha ukusuka emlanjeni irafting, ikwayimayile nje ukusuka ngoLwesihlanu ebusuku umculo odumileyo webluegrass kwiziko loluntu. Ikhabhinethi ilala i-6 kwaye inokuhlala ubusuku obubini. Ikhabhinethi inekhitshi eligcweleyo, amagumbi okulala amabini, ibhedi elingana ukumkani & ukumkanikazi Igumbi lezemidlalo eliphakamileyo le-queen ubungakanani futon. IiTV kunye ne-intanethi. Disney+ & ESPN+
Ifumaneka kumlambo, phumla emva kokupheka isidlo kwi-grill yangaphandle, kunye netafile kunye nezitulo ezikumgangatho ophezulu omelene namanzi apholileyo. Enkulu 55" i-Smart TV kwigumbi lokuhlala kunye noomabonakude abancinci abancinci kumagumbi okulala. Ihonjiselwe umntu ongaphandle, iza ne-intanethi enesantya esiphezulu kwabo kufuneka bahlale beqhagamshelwe. kunye neengcango zebhafu Iwasha epakishweyo kunye nesomisi ziyafumaneka kwikhabhathi.Ukongezwa kwi-ambience, indawo yomlilo ibekwe kwigumbi lokuhlala, kwaye ukongezelela kukho isixokelelwano sesandi esigqwesileyo esinokuqhagamshelwa ngokulula kuyo nayiphi na i-apps yobhaliso yebluetooth. Amanzi ahluziweyo abonelelwa phantsi kwetephu ekhitshini kunye nomkhenkce kwisikhenkcezisi. Ikhabhinethi ikwincam yephecana leehektare ezingama-34 kwaye indoda kwindawo yogcino-fixit yomphathi wesiza ihlala kufuphi. Iyunithi ye-AC inesistim ye-ionizing eyakhelweyo ukubulala ukungunda kunye neentsholongwane.Ibhafu eshushu yabantu abathandathu iyafumaneka ukuba yonwabele kwisiza.Izitulo zokukhuthaza abantwana ziyafumaneka xa uzicelile.
Kufutshane kwaye kufumaneka nge-1 kaSeptemba yindawo ye-treehouse ebandakanya ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela elinomgangatho omkhulu ojonge umlambo. Iya kufumaneka ukuba irente kunye nekhabhinethi okanye njengeyunithi eyahlukileyo. Yayiyilwe ngokuyintloko njengendawo yokuphuma kwesibini. Ukuba irente kunye isaphulelo se-10% siyanikezelwa. Ngamaxesha athile, undwendwe lwe-treehouse lunokucela ukusetyenziswa kwewasha kunye nesomisi esikwigumbi elingaphantsi kwendlwana. Esi sithuba siqhelekile kuzo zonke iindwendwe kwaye sahlukile kwiwasha kunye nesomisi esingaphakathi kwendlwana.
Ifumaneka kwimizuzu nje embalwa ukusuka eTownsend kunye nokungena kwiPaki yeSizwe yeeNtaba zeMsi, kukuhamba nje ngemizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 ukuya ePigeon Forge naseDollywood ngendlela yeFoothills Parkway. Iibhayisekile ezininzi zisebenzisa iindlela ezingasemva zokuhlola nokuzilolonga.
Intombi yam uEmily iya kuba ngoyena mntu uphambili kuqhagamshelwano, kodwa ndiya kuhlala ndifumaneka ukuze ndisombulule iingxaki. Sikwanaye nomphathi wesiza, indoda yogcino ekufuneka ikwazi ukusombulula uninzi lwemiba yogcino.
Le yiAirBNB yethu yokuqala kwaye yenzelwe ngokukodwa
ukuphucula iindwendwe ze-AirBNB
Intombi yam uEmily iya kuba ngoyena mntu uphambili kuqhagamshelwano, kodwa ndiya kuhlala ndifumaneka ukuze ndisombulule iingxaki. Sikwanaye nomphathi wesiza, indoda yogcino ekufune…